ဟင်းပွဲတွေကို အပျော်တမ်းပုံတွေထက် ပိုပြီးကောင်းအောင်ဘယ်လိုရိုက်မလဲ? (စားသောက်ဖွယ်ရာ ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်းအတွက် လမ်းညွှန်ချက်ကောင်းများ) – Digital Photography Myanmar
HomeBasic Photographyဟင်းပွဲတွေကို အပျော်တမ်းပုံတွေထက် ပိုပြီးကောင်းအောင်ဘယ်လိုရိုက်မလဲ? (စားသောက်ဖွယ်ရာ ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်းအတွက် လမ်းညွှန်ချက်ကောင်းများ)
May 17, 2016 Jedi Basic Photography, Tips & Tutorials 0
ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အစားအသောက်တွေကို ဓါတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုရင် အနုပညာအမြင် ရှိဖို့ လိုကောင်းလိုခဲ့မှာပါ ဒါပေမယ့် အခုချိန်မှာတော့ အစားအသောက်တွေကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး လူမှုနက်ဝပ် ပေါ်တင်နေကြတာဟာ အရမ်းပဲ ခေတ်စားလို့လာနေပါပြီ။
အစားအသောက် ဓါတ်ပုံပေါင်း ၁၇၈ သန်းကျော်ဟာ #food ဆိုတဲ့ tag အနေနဲ့ Instagram မှာ တင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုပဲ ခင်ဗျားအချိန်ရရင် Twitter ကိုသွားကြည့်လိုက်ပါဦး ခင်ဗျားရဲ့ သိကောင်းသိနိုင်တဲ့လူတစ်ချို့ ဒီညနေမှာ ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေစားနေလဲဆိုတာ #food ဆိုတဲ့ tag ကိုကြည့်တာနဲ့တင် တွေ့နိုင်နေပါပြီ။
လူအများစုအတွက်ကတော့ဗျာ အစားအသောက်တွေကို ဓါတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုတာ အပျော်တမ်းလုပ်ကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် တချို့ လူတွေကတော့ အဲဒီအလုပ်က အခကြေးငွေရယူပြီး လုပ်နေကြတာရှိပါတယ်။
ဟူးချ် ယွန်ဆင် က Heston Blumenthal, Yotam Ottolenghi နဲ့ Thomasina Miers တို့အတွက်စားသောက်ဖွယ်ရာတွေကို ဓါတ်ပုံရိုက် ပေးနေတဲ့ ကြေးစား ဓါတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်ပါ။ ၂၀၁၆ Sony World Photography Awards ကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ အစားအသောက်ဓါတ်ပုံတွေအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အကြံပေးချက်တွေရယူဖို့ အစားအသောက်ဓါတ်ပုံတွေရိုက်တဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာ ဟူးချ် ဂျွန်ဆင်ကို ကျွန်တော်တို့ ဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်။
SONY A7 RII full frame ကင်မရာ ကို သုံးပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ တွေ ဟူးချ်ရဲ့ အကြံပေးချက်တွေကို စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ့်ကို ပဲ ပန်းကန်ပြားပေါ်က အစားအသောက်တွေကို အရသာရှိတဲ့ပုံပေါ်လာအောင် သူ့ရဲ့ အကြံပေးချက်ကတွေက ထိရောက်ခဲ့ပါတယ်။
၁) သင့်ပတ်ဝန်းကျင်က အလင်းရောင်ကိုယူပါ
Photography ဆိုတာ တကယ်တော့ အလင်းပါပဲ၊ အကောင်းဆုံးဓါတ်ပုံတွေရဖို့ အလင်းရောင်ကို လိုအပ်တဲ့အတွက် အလင်းက ဘယ်ကလာတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားသိဖို့လိုအပ်တယ်လေ။ ဖြစ်နေကျ အမှားတစ်ခုက subject ကို တိုက်ရိုက်အလင်းရောင် အလွန်အကျွံပေးခြင်း၊ အလင်းရောင်ကိုအရမ်းစူး့စေခြင်း တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံထွက်ကောင်းကောင်းရဖို့ဆိုရင် အလင်းရောင်ကို ကင်မရာနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် နေရာကနေ ကျနေတုန်း ကင်မရာကို ၄၅ ဒီဂရီလောက် စောင်းပြီးရိုက်ပါလို့ပြောပါရစေ။ အကောင်းဆုံးအနေအထားရဖို့ ဓါတ်ပုံရိုက်မယ့် စားစရာကို နေရာရွှေ့ပေးကြည့်ပါ ဒါမှမဟုတ် အလင်းရောင်နည်းတယ်ထင်ရင် အဖြူရောင် လက်သုပ်ပုဝါလိုမျိုးကို reflector အဖြစ်အသုံးပြုပါ။
တကယ်လို့ တိုက်ရိုက်ကျနေတဲ့အလင်းရောင်က အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ အရိပ်ကျအောင် လုပ်ကြည့်ပါ။ အဲဒီ အချက်တွေကြောင့် ခင်ဗျားအတွက် အလင်းရောင်တောက်တောက်မလိုပါဘူး၊ ရှိတဲ့အလင်းရောင်ကိုပဲ အကောင်းဆုံး အသုံးချတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
၂။ Apertures မျိုးစုံအသုံးပြုခြင်း
Aperture ကျယ်ကျယ်သုံးပြီဆိုတာနဲ့ ကင်မရာထဲကို အလင်းပိုဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ f/2 လောက်ဆိုရင် အလင်းများများဝင်လာပီး bokeh effect ကြောင့် နောက်ခံ ဝါးပြီး ပြတ်သားတိကျတဲ့ အစားအသောက် ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
f/5 လောက် သို့မဟုတ် ပိုကျဉ်းတဲ့ Aperture ထားရင်တော့ အရာဝတ္ထုတွေပိုမိုပြီး focus လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပေမယ့် ပိုကြာတဲ့ exposure time တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲလိုရိုက်ရင်တော့ အစားအသောက်တွေကို ပိုပြီး focus မိနေမှာဖြစ်ပြီး နောက်ခံတွေပါ မြင်ရနိုင်ပါတယ်။ ပိုကြာတဲ့ exposure time အတွက်တော့ ငြိမ်နေတဲ့ လက်တစ်စုံ ဒါမှဟုတ်လဲ tripod လိုပါလိမ့်မယ်။ လက်နဲ့ကိုင်ရိုက်မယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားရဲ့ တံတောင်နှစ်ခုကို ရင်ဘတ်မှာကပ်၊ အသက်အောင့်ပြီး shutter ကို လွှတ်လိုက်ပါ၊ ပြီးမှ အသက်ပြန်ရှူထုတ်လိုက်ပါလို့ အကြံပေးပါရစေ။
ခင်ဗာျးရဲ့ ဖုန်းကို သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာ ငြိမ်နိုင်သမျှ ငြိမ်အောင်ကိုင်ပြီး ရိုက်ပေါ့ဗျာ။
၃။ တတ်နိုင်သမျှ မြန်မြန်ရိုက်ပါ
ခင်ဗျားရဲ့ စားသောက်ဖွယ်ရာတွေဟာ ချက်ချက်ပြီးချင်းအချိန်မှာပဲ ကြည့်လို့ အကောင်းဆုံးအနေအထားရှိနေတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ ဒီ့အတွက်ကြောင့် တတ်နိုင်သမျှ မြန်မြန်သာရိုက်ပါ။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့ အမျှ ဆော့စ်တွေဟာ ပန်းကန်ပေါ်ကို ဟင်းတွေပေါ်က စီးကျကုန်တာမျိုး၊ ဟင်းဆီတွေ ခဲလာတာမျိုး နဲ့ အရွက်စိမ်းတွေ ညှိုးလာတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့များ ကြည့်ရတာ အဆင်မပြေဘူးလို့ထင်ရင် လက်ကိုင်ရေဖြန်းဘူးလေးနဲ့ ဟင်းတွေပေါ်ဖြန်းပေးတာမျိုးလုပ်ကြည့်ပါ။ ဒါပေမယ့် ရေတွေတော့ ရွှဲနေအောင်မလုပ်မိပါစေနဲ့ဗျာ၊ အမြင်မှာ ပိုပြီးလတ်ဆတ်သယောင် ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
၄။ စားသောက်ဖွယ်ရာတွေကို နေရာ ပြန်ချပေးပါ
စားသောက်ဖွယ်ရာတွေကို နေရာပြန်ချဖို့ မကြောက်ပါနဲ့။ ဟင်းပန်းကန်ထဲမှာ ဟင်းဖတ်တွေ နေရာချထားတာ အဆင်မပြေရင် ရွှေ့ကြည့်ပါ၊ လှည့်ကြည့်ခြင်း ဖြင့် ပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် လုပ်ပါ။ ပန်းကန်ကို လှည့်ကြည့်ပြီး အမြင်အမျိုးမျိုးရအောင် ဖန်တီးကြည့်ပါ၊ အလင်းအမှောင်မတူတာကြောင့် ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ရိုက်ဖို့အားလုံးအဆင်သင့်ဖြင့်ပြီဆိုရင် စားစရာကို ဖဲ့ကြည့်ဖို့ အားမနာပါနဲ့၊ ဥပမာ ကြက်ဥအနှစ် ဒါမှမဟုတ် အသားကင်ထဲက ထွက်လာတဲ့ အရည်တွေက တကယ့်ကို ကြည့်သူကို ဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မယ်၊ ငရုပ်ကောင်းမှုန့် ထူထူ ဖြူးပြီး အမြင်လှအောင် လုပ်ကြည့်ပါ၊ ဒါမဟုတ် အချိုပွဲပေါ်မှာ ပူစီနံ ရွက်လေး တစ်ရွက်လောက်တင်ပြီး ပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် စမ်းကြည့်သင့်ပါတယ်။
၅။ စားသောက်ဖွယ်ရာဓါတ်ပုံတွေအတွက် အပြင်အဆင်
အများစုလုပ်ကြတဲ့ အမှားတစ်ခုကတော့ အားလုံးကို ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးနဲ့ နေရာချမိတာပါပဲ။ စားသောက်ဖွယ်ရာဓါတ်ပုံပညာမှာ အစားအစာ တွေက အဓိက ပါပဲ။ တခြား မလိုအပ်တဲ့ အသုံးအဆောင်တွေနဲ့ အစားအသောက်တွေကို မရောမိစေါနဲ့။ သို့ပေမယ့်လည်း ခက်ရင်းတို့ဘာတို့ကတော့ စားစရာအမျိုးအစားကို ပိုပြီးပေါ်လွင်အောင် ကူညီနိုင်ပါတယ်၊ ဥပမာ ခရင်းနှစ်ချောင်း တူတူပြထားတာဟာ အတူတကွ စားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။
Focus မမိအောင်လုပ်ထားတဲ့ ခက်ရင်းတွေ၊ ရေခဲထည့်ထားတဲ့ဖန်ခွက်တွေစတာတွေလည်း ခုနကပြောသလိုပဲ ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ အချက်ကို ပိုပြီးပေါ်လွင်အောင် ကူညီနိုင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင် ဟင်းပွဲကို ပြန်ခွင့်ရခဲ့ရင်တော့ ဒီဇိုင်းလေးတွေဆွဲထားတဲ့ ပန်ကန်ပြားကို သုံးပြီး အဖြူရောင်စင်စစ်ကြီးမဖြစ်အောင် ရှောင်ကျဉ်နိုင်ပါတယ်။ ပိုပြီးတော့လဲ ဓါတ်ပုံထဲမှာ အရောင်တွေညီညာစေနိုင်တာပေါ့။
၄၅ ဒီဂရီလောက် ကင်မရာကို စောင်းပြီးရိုက်တာ အကောင်းဆုံးလို့ ဆိုပေမယ့်လဲ တခြား frame တွေရအောင် အနေအထားကို ပြောင်းကြည့်ပါ။
နောက်ဆုံးနိဂုံးချုပ်ပြောရရင် ဟင်းပွဲဟာ အလယ်ခေါင် ကျနေဖို့မလိုပါဘူး၊ ဟင်းတစ်ပွဲလုံးပါနေဖို့မလိုပါဘူး၊ ရက်စ်ဘယ်ရီ တစ်လုံးလောက်ပဲ focus မိနေရင်အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်လဲ အလင်းရောင်တန်းလေးက အလှဆင်ထားတဲ့ ဟင်းရွက်တွေပေါ်ထိုးနေရင်လဲ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
ခင်ဗျားတို့လဲ ဟင်းပွဲတွေကို ဘယ်လိုရိုက်လဲ၊ ဟင်းပွဲတွေဓါတ်ပုံရိုက်တာ ဘယ်လိုမျိုးက ပိုကောင်းလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးချင်ရင် အောက်မှာ မှတ်ချက်ပေးသွားပါ။
ကိုးကား။ ။ Chris Hall ရဲ့ How to shoot food-likeapro top tips for food photography ကိုဘာသာပြန်ပါသည်။